सपनामा देखिएको भैरवको मूर्ति विपनामा भेटियो जय भैरव ! -
सपनामा देखिएको भैरवको मूर्ति विपनामा भेटियो जय भैरव !
सपनालाई विपनामा परिणत गर्ने भाषण धेरै हुन्छ, तर सपनामा देखिएको विषय विपनामा परिणत नहुन पनि सक्छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर २ दुवाकोटमा सपनामा देखिएको तथ्य विपनामा परिणत भएको छ ।
हेर्नुहोस, आफ्नी दिदीको बिहेमा बहिनीले भेनालाई जिस...
नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानीहुन्छ रे !! यो ...
तरकारी भन्दा सस्तो शरीर ! वेश्यावृतिमा लाग्नेहरु ब...
एक बिहानै साली नदीमा यस्तो अबस्थामा भेटिए महिलाहरु...
अशोकको आमा एक्कासी बिरामी, भन्छिन, ‘नया घरमा सर्न ...
क्यानडाबाट सन्दिपलाई ४०,००००००को ओईरो | बिश्वमै सन...
Prevकतारको प्रतिष्ठित कम्पनीद्धारा एक नेपाली कामदारलाई दियो नगद इनाम
Nextम अपाङ्ग हुँ तर सेक्स मेरो पनि आवश्यकता हो’